कोरोनाको तेश्रो लहरबाट कसरी जोगाउने बालबालिकालाई ? यी ५ कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस् - Everest Dainik - News from Nepal
कोरोनाको तेश्रो लहरबाट कसरी जोगाउने बालबालिकालाई ? यी ५ कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्
एजेन्सी । कोरोनाको तेस्रो लहर आक्रामक गतिमा फैलिरहेको छ । यसको चपेटामा सबै उमेर समूहका मानिस परेका छन् ।
यतिखेर मौसम निकै चिसो छ । त्यसैपनि बालबालिका र बृद्धहरुलाई हिउँदको मौसममा बिरामी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमाथि अहिले देखिएको कोरोनाको लहरले उनीहरु झन बढी प्रभावित हुन सक्छन् ।
त्यसैले कोरोनाबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावकहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । बालबालिकामा हुने कुनै पनि लक्षणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।
१. यदि बच्चामा उच्च ज्वरो र काँप्ने जस्ता लक्षण देखिएमा होसियार हुनुहोस्। कोरोनाको तेस्रो लहरको समयमा कसरी आफ्नो मुटुको टुक्रालाई संक्रमणबाट टाढा राख्ने र सुरक्षित राख्ने भन्ने बताउनुस्।
२. चिकित्सकहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर अन्य दुई छालभन्दा बढी संक्रामक भएको बताएका छन् । यो बच्चाहरुको लागी खतरनाक पनि छ। उनले पहिलो र दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बालबालिकामा नपरेको तर तेस्रो लहरले बालबालिकामा पनि संक्रमण हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि धेरै सचेत र सचेत हुन जरुरी छ ।
३. चिकित्सकहरुले कोरोना भाइरस संक्रमित बालबालिकामा उच्च ज्वरो आउने र काँप्ने लक्षण देखिएको बताएका छन् । त्यसैले यी लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उमेर ११ देखि १७ वर्षसम्म रहेको छ । दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा पनि यस्ता लक्षण देखिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसका विशेषताहरू डेल्टा भेरियन्टभन्दा अलि फरक रहेका छन् । त्यसैले थप सचेत हुन जरुरी छ । यो डेल्टाको विपरीत, ओमिक्रोनका बिरामीहरूमा स्वाद र गन्धको कमी सामान्य छैन् । तर, अधिकांश बालबालिकालाई भेन्टिलेसनको आवश्यकता नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
४. बालबालिकामा देखिने यो रोगको सामान्य लक्षणलाई पटक्कै बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सामान्य लक्षण देखिएमा तुरुन्तै डाक्टरसँग सम्पर्क गरी परामर्श लिएर मात्र उपचार गराउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उच्च ज्वरो आएमा अन्य बिरामीजस्तै नवजात शिशुलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छैन । चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र बालबालिकालाई अस्पतालमा भर्ना गर्न पर्छ। कोरोनाबारे थप आत्तिनुभन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसको लागि कोरोना निर्देशनहरू कडाईका साथ पालना गर्न आवश्यक छ। बालबालिकामा संक्रमणको गम्भीरता डेल्टा भेरियन्टको जस्तै छ।
५. यो भेरियन्टको संक्रमक डेल्टा भेरियन्टको भन्दा कम हुन्छ। ओमिक्रोन भाइरसले मुख्यतया बिरामीको माथिल्लो श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने गरेको छ । त्यसैले यसमा चिसो, टाउको दुख्ने, नाक बग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसबाहेक ज्वरो पनि काँपनेसँगै आउँछ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको विपरीत, ओमिक्रोनका बिरामीमा स्वाद र गन्ध गुमाउनु सामान्य कुरा होइन । चिकित्सकको अनुसार दशमध्ये दुई वा तीनजना बिरामीले मात्रै गन्ध र स्वाद गुमाएको गुनासो गर्ने गरेको छ ।
ओमिक्रोन भाइरस लगातार उत्परिवर्तन हुन्छ। कोरोना भाइरसले लगातार रूप परिवर्तन गरिरहन्छ, अर्थात् यसको नयाँ संस्करण आउने क्रम जारी छ। यी मध्ये केही भेरियन्टहरू बढी खतरनाक हुन सक्छन्, वा धेरै छिटो फैलिने ती हुन सक्छन्। वैज्ञानिकहरूको शब्दावलीमा, तिनीहरूलाई चिन्ताको रूप मानिन्छ। कोरोना भाइरसमा यसअघि कहिल्यै नदेखेको परिवर्तन भएको छ । यी धेरैजसो परिवर्तनहरू भाइरसका ती भागहरूमा भएका छन् जहाँ अवस्थित खोपहरूले आक्रमण गर्छन्। भाइरसको यो भागलाई स्पाइक प्रोटिन भनिन्छ। ओमिक्रोन भेरियन्टको स्पाइक प्रोटिन भागमा भएको परिवर्तनले सुरुमा हालका खोपहरू ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो।